Maxaabiis maydkoodii laga helay Isbitaal ku yaala Jig-Jiga
Dagaal lagu jabiyay Ciidamada cadawga Itoobiya
Roobab xoog leh oo Ogadenya ka da’ay
Itoobiya oo caddaysatay sida ay uga soo horjeedo nabada Soomaaliya
Eritereya oo canbaaraysay booqashada Blair ee Itoobiya iyo Suudaan
Barnaamuj gaar ah oo aanu ku waraysanayno Aqoonyahan mu alif ah oo ka soo jeeda gobolada waqooyi galbeed Soomaaliya iyo suugaan hlgameed.
Maxaabiis xabsiga ciidamada gumaysiga ee magaalada Jig-Jiga ku jirtay oo mudaba la la , aa ayaa qaar ka mid ah meedkoodii laga helay Isbitaal ay ciidamadu ku leeyihiin Magaalada Jig-Jiga.
27.09.2004 ayaa meedkii nin lagu magacaabi jiray Mustafe oo mudo Laba bilood ah ay eheladiisii xabsiga ka la`aayeen laga helay Isbitaalka ugu wayn ee ay ciidamada gumaysiga Itoobiya ku leeyihiin magaalada Jig-Jiga. Marxuubkan ayaa meedkiisa la helay isaga oo ay katiinad kaga xidhan tahay Lug iyo Gacan isla markaasna ay ku yaalaan dhaawacyo xun xun oo jidhkiisa loo gaystay, dhaawacaas ayaa loo malaynayaa in uu yahay midka uu u dhintay.
Eheladii Marxuumka ayaa loo diiday in ay aastaan maydka Allaha u naxariistee Mustafe, hase yeeshee markay bixiyeen Lacag 2000 oo Bir ah oo laaluush ah ayaa loo ogolaaday in ay meedka marxuunka qaataan ayna aastaan.
Ma aha markii ugu horeeysay ee la helo maydka maxaabiis ay ciidamada Itoobiya uus duugeen, waana dhaqan ay xukumada Itoobiya u leedahay xasuuqista maxaabiista sida sharci darada ah xabsiyadeeda uga buuxa.
Dagaal ku dhex maray 01.10.2004 Tuulada lagu magacaabo Banbaas oo magaalada Jig-Jiga u jirta 20km koox aad u tababaran oo ka mid ah ciidanka Jabhada wadaniga xoreeynta Ogaadeenya iyo ciidamada cagajiidka gumaysiga Itoobiya, ayaa ciidamada doolka ah ee gumaysiga Itoobiya lagaga dilay 17 Askari waxaana lagaga dhaawacay shan askari oo kale.
Dagaalkaas ayaa ciidamada cadawga waxaa lagaga Afduubtay 7 ka mid ah maleeshiyada ay ku magacaabaan Tadaaqii, Soomaaliduna ay u taqaan hanba ku nool.Waxaa kaloo ciidamada cadawga halkaas lagaga furtay hub yar yar iyo saanad kale.
Roobab lixaad ayaa horraantii toddobaadkan ka da’ay qaar ka mid ah gobollada dalka Ogadenya, sidaas waxaa qortay shabakada internetka ee Qoraxay Online.
Gobollada uu raabkani sida wayn uga da’ay waxaa ka mid ah gobollada Qorraxay iyo Doollo oo la sheegay in roobab aad u badani ay ka da’een.
Dadka ku dhaqan deegaanada ay roobabkani ka da’een ayaa baryahan denbe oo dhan ku jiray xilli aad u kulul, gaar ahaan gobolka Doollo wuxuu ka mid ahaa gobollada Ogadenya ee abaarta ba’ani ku dhifatay, kuwaasoo ay ururrada samafalka ahi ka digeen in macaluul ba’ani ay ka dhici karto haddii aan xilliga Dayrta roob fiican la helin. Sidoo kale waxaa lagu soo warramayaa in roobabkani ay ka da’een badi gobollada dalka Ogadenya.
Cabsidii laga qabay in Itoobiya ay dibin-daabyayso qorshaha dib u-heshiisiinta kooxaha soomaaliyeed ayaa sii korodhay, tan iyo markii ay bishii hore wasiirrada arrimaha dibada ee dalka IGAD ku kulmeen magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Shirka dib u-heshiisiinta ee kooxaha soomaalida uga socda magaalada Nairobi ayaa ka leexday khadkii ay Itoobiya filaysay inuu ku socdo, waxaana laga awood roonaaday kooxihii Itoobiya gacan saarka la lahaa, sidaas darteed waxay Itoobiya u muuqataa inayna raalli ka ahayn natiijada la filayo inay shirka ka soo baxdo.
Qaar ka mid ah wasiirrada arriaha dibada ee dalalka IGAD ayaa walaac ka muujiyay mawqifka Itoobiya ee ku aaddan shirka dib u-heshiisiinta soomaalida.
Wasiirka arrimaha dibada ee xukuumadda Addis Ababa, oo ka qayb geli jiray shirarka ay wasiirrada IGAD kaga hadlayaan arrimaha Soomaaliya, ayaa diiday inuu ka mid noqdo wasiirradii arrimaha dibada ee dalalka IGAD ee dhawaan booqday dalka Maraykanka, si ay caalamka warbixin uga siiyaan horumarka laga sameeyay arrimaha nabadaynta Soomaaliya, isla markaana ay taageero ugu raadiyaan dawlada cusub ee Soomaaliya loo dhisayo.
Wasiirka arrimaha dibada ee xukuumadda Addis Ababa wuxu sidoo kale diiday inuu ka qayb galo shirarka kale ee wasiirrada IGAD ay kaga hadli doonaan arrimaha Soomaaliya, wuxuuna bixiyay cudur-daar aan lagu qancin. Wasiirrada arrimaha dibada ee dalalka xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD waxay mar kale arrimaha Soomaaliya ka shiri doonaan 16 bishan Oktober.
Dawlada Eritereya ayaa si wayn u canbaaraysay booqashada uu ra’iisal wasaaraha Ingiriiska Tony Blair ku tegay dalalka Itoobiya iyo Suudaan, waxayna booqashadan ku tilmaantay inay tahay mid meel ka-dhac ku ah garaadka afrikaanka.
Booqashada uu Blair ku tegay Itoobiya iyo Suudaan waxay meel kaga dhacaysaa garaadka afrikaanka, sababtoo ah xukuumadda Addis Ababa waxay ku gacan saydhay inay u hooggaansanto sharciga caalamiga ah, sidaas waxaa yidhi wasiirka warfaafinta ee dawlada Eritereya Cali Cabdu Axmed.
Wuxuu kaloo intaas ku daray in booqashada Blair ay daliil fiican u tahay sida ay quwadaha waawayn qaarkood u arkaan dadka afrikaanka ah.
Cali Cabdu Axmed wuxuu kaloo dhalliilay booqashada uu Blair ku tegay dalka Suudaan, isagoo sheegay in dalka Suudaan uu yahay dal khatar ah oo argagixisada ku caan-baxay.
Afeef: Wararkan waxaa leh radio xorriyo